Izimo ezinhle zombuso ezaprofethwa uNkulunkulu zizofezeka futhi zigcwaliseke kanjani? | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Lapho uNkulunkulu ekhipha ulaka lwakhe olukhulu, umhlaba wonke uyokwehlelwa yizo zonke izinhlobo zezinhlekele njengomphumela walo, njengokuqhuma kwentaba-mlilo. Uma umi ngaphezu kwesibhakabhaka kuyabonakala ukuthi emhlabeni zonke izinhlobo zezinhlekelele ziyasondela kuso sonke isintu, usuku ngosuku. Uma ubuka phansi uphezulu, umhlaba ufana nezinhlobonhlobo zezimo ngaphambi kwentaba-mlilo. Amanzi awumlilo ayagobhoza yonke indawo, udaka lwentaba-mlilo lugeleza yonke indawo. Izintaba ziyagudluka, nokukhanya okungashisi kuyacwebezela yonke indawo. Umhlaba wonke sewuzike emlilweni. Lesi yisigcawu sikaNkulunkulu ekhipha ulaka Lwakhe, futhi yisikhathi sokwahlulela kwakhe. Bonke labo abasenyameni ngeke basinde. Kanjalo izimpi phakathi kwamazwe nezingxabano phakathi kwabantu ngeke zidingeke ukuthi zibulale wonke umhlaba, kodwa “uyothokozela ngokusobala” isandla sokusola kukaNkulunkulu. Akekho oyophunyuka kukho futhi bayodlula kukho ngamunye ngamunye. Emva kwalokho wonke umhlaba uyophinde futhi ukhazimule ngokukhanya okungcwele nesintu sonke siyobuye siqale impilo entsha. Futhi uNkulunkulu uyobe ephumule phezu komhlaba ebusisa sonke isintu nsuku zonke.
kwesithi “Isahluko 18” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
Lapho umsebenzi wokunqoba sewuqediwe, umuntu uzolethwa ezweni elihle. Le mpilo, phela, izobe isesekhona emhlabeni, kodwa izobe ingasafani nhlobo nempilo yomuntu yanamuhla. Yimpilo sonke isintu esizoba nayo lapho isintu sonkana sesinqotshiwe, kuzoba isiqalo esisha somuntu emhlabeni, futhi ukuba isintu sibe nempilo enhle kangako, kuyobe kuwubufakazi bokuthi isintu sesingene embusweni omusha futhi omuhle. Kuzoba wukuqala kwempilo yomuntu noNkulunkulu lapha emhlabeni. Isisekelo sempilo enhle kangaka kufanele kube wukuthi, emuva kokuthi umuntu esenziwe waba msulwa futhi wanqotshwa, uyazithoba phambi koMdali. Ngakho, umsebenzi wokunqoba, isigaba sokugcina somsebenzi kaNkulunkulu ngaphambi kokuthi isintu singene esiphethweni esimangalisayo. Impilo enje impilo yesikhathi esizayo yomuntu emhlabeni, yimpilo enhle kunazo zonke emhlabeni, uhlobo lwempilo elangazelelwa ngumuntu, inhlobo umuntu angakaze ayithole emlandweni womhlaba, Ngumphumela wokugcina womsebenzi wokuphatha weminyaka eyizi-6,000, yilokho isintu esikulangazelelayo kunakho konke, futhi kuyisithembiso sikaNkulunkulu kumuntu. Kepha isithembiso sakhe asikwazi ukufezeka masinyane: Umuntu uzongena ekupheleni kwesikhathi esizayo kuphela uma umsebenzi wezinsuku zokugcina sewuqediwe futhi esenqotshiwe ngokuphelele, okusho ukuthi lapho uSathane esehluliwe nya. Umuntu uzongabi nemvelo enesono uma esecwengiwe, ngoba uNkulunkulu uzobe esemnqobile uSathane, okusho ukuthi ngeke kube khona ukuphazamisa kwamandla anobutha, futhi azobe engekho amandla anobutha angahlasela inyama yomuntu. Ngakho umuntu uzobe ekhululekile futhi engcwele—uzobe esengene kwiphakade. Uma kuphela amandla anobutha obumnyama eseboshiwe, ilapho umuntu ezobe ekhululekile konke lapho eya khona, futhi ngaphandle kokudlubulunda noma ukuphikisana. USathane kufanele ukuthi aboshwe nje, ukuze umuntu zimhambele kahle izinto; namhlanje izinto azimhambeli kahle ngoba[a] uSathane usavusa uthuthuva yonke indawo emhlabeni, futhi nangenxa yokuthi umsebenzi kaNkulunkulu wokuphatha wonke awukafiki ekugcineni kwawo. Uma uSathane esenqotshiwe, umuntu uzobe esekhululekile ngokuphelele; uma umuntu ezuza uNkulunkulu futhi ephuma ngaphansi kwamandla kaSathane, uyobona iLanga lokulunga.
Lapho umuntu ethola impilo yangempela yomuntu emhlabeni, amandla kaSathane ewonke ayoboshwa, futhi umuntu uyophila kalula lapha emhlabeni. Izinto ngeke zibe nkimbinkimbi njengoba ziyizo manje: ubudlelwane babantu, ubudlelwane bokuhlalisana kwabantu, ubudlelwano bemindeni obunkimbinkimbi…, buwuhlupho kakhulu, kubuhlungu kakhulu! Impilo yomuntu lapha ilusizi kakhulu! Uma umuntu esenqotshiwe, inhliziyo nomqondo wakhe kuzoshintsha: uzoba nenhliziyo emhloniphayo uNkulunkulu kanye nenhliziyo emthandayo uNkulunkulu. Uma bonke labo abasemhlabeni jikelele abafuna ukuthanda uNkulunkulu sebenqotshiwe, okusho ukuthi, uma uSathane esenqotshiwe, futhi uma uSathane—wonke amandla obumnyama—eseboshiwe, impilo yomuntu emhlabeni ngeke isaba nokukhathazeka, futhi uyokwazi ukuphila ngokukhululeka emhlabeni. Uma impilo yomuntu ingenabo ubudlelwano obungobenyama, futhi ingasenabo ubunkimbinkimbi benyama, bekuyoba lula kakhulu. Ubudlelwano bomuntu benyama bunkimbinkimbi kakhulu, futhi ukuba komuntu nalezi zinto ezinje kungubufakazi bokuthi akakazikhululi ethonyeni likaSathane. Ukube ubunobudlelwano obufanayo nabafowenu nodadewenu, njengobudlelwano nomndeni wakho ojwayelekile, ubungeke ube nokukhathazeka, futhi ubungeke udinge ukukhathazeka ngamuntu. Bekungamnandi lokho, futhi ngale ndlela umuntu ubengabe uphunyuziwe engxenyeni yokuhlupheka kwakhe. Ukuphila impilo yomuntu ejwayelekile emhlabeni, umuntu uzobe efana nengelosi; nakuba esengowenyama, uzobe efana nengelosi kokuningi. Lesi isithembiso sokugcina, isithembiso sokugcina esinikwe umuntu. Namuhla umuntu ubhekana nokusolwa nokwahlulelwa; ucabanga ukuthi ukudlula komuntu kulezi zinto akusho lutho? Ungenziwa umsebenzi wokusola nokwahlulela ngaphandle kwesizathu? Phambilini kuke kwathiwa ukusola nokwahlulela umuntu ukumfaka lwalasha, okusho ukuthatha isiphetho kanye namathemba akhe. Lokhu kungenxa yento eyodwa: ukuhlanzwa komuntu. Umuntu akafakwa lwalasha ngamabomu, emuva kwalokho uNkulunkulu ebese egeza izandla Zakhe ngaye. Esikhundleni salokho, okokubhekana nokuhlubuka okukumuntu, ukuze ekugcineni izinto ezikumuntu zihlanzeke, ukuze abe nolwazi lweqiniso ngoNkulunkulu, futhi afane nomuntu ongcwele. Uma lokho kwenziwe, konke kuyofezeka.
a. Umbhalo wasekuqaleni uthi “namuhla, kungoba.”
Okwedlule：Sinjani ngempela isiphetho sesintu kanye nezimo ezinhle zombuso? Yimaphi amazwi kaNkulunkulu aqinisekisa lokhu?
Okulandelayo：UNkulunkulu USomandla Usenginike Ithuba Lesibili Empilweni